ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခဲ့ပေမယ့် အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်များ
ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခဲ့ပေမယ့် အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ လုပ်ငန်းရှင် (၅) ဦး
9 Feb 2018 . 5:18 PM
လူတစ်ယောက်ဟာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို တည်ထောင်လိုက်ပေမယ့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ ဝင်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ သူတစ်ယောက်တည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီအချိန်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေက သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်တတ်ကြပြီး ကုမ္ပဏီရဲ့တည်ထောင်သူတွေကိုတောင် အလုပ်ထုတ်ပစ်တတ်ကြပါတယ်။ ကဲ . . . ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေအကြောင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
(၁) ဒေးဗစ် နယ်လီမန်း (David Neeleman)
ဘရာဇီးလုပ်ငန်းရှင် ဒေးဗစ် နယ်လီမန်း (David Neeleman) က ၁၉၉၈ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ JetBlue လေကြောင်းလိုင်းကို တည်ထောင်လိုက်ပါတယ်။ ၂ဝဝ၂ခုနှစ်မှာ CEO အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီး သူ့လစာ ဒေါ်လာ၂သိန်း (ဆုကြေး ဒေါ်လာ၉သောင်း) ကို ဝန်ထမ်းတွေအတွက် ရံပုံငွေအဖြစ် လှူဒါန်းတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ လေကြောင်းလိုင်းဟာ ကမောက်ကမဖြစ်ကုန်ပြီး ၂ဝဝ၇ခုနှစ်မှာ ‘ဒေးဗစ် နယ်လီမန်း’ လည်း အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။
(၂) ဂျော့ ဇင်းမား (George Zimmer)
ဂျော့ ဇင်းမား (George Zimmer) ဟာ ကမ္ဘာကျော်အမျိုးသားအဝတ်အထည်ကုမ္ပဏီ ‘Men’s Wearhouse’ ကို ၁၉၇၃ခုနှစ်မှာ တည်ထောင်လိုက်ပါတယ်။ တည်ထောင်သူအနေနဲ့ CEO တာဝန်ရော ဥက္ကဌတာဝန်ပါ ပူးတွဲထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီဟာ အများပိုင်ဖြစ်သွားပေမယ့် သူဟာ အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ချင်ပြီး ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ မသင့်မြတ်ဖြစ်ကာ ၂ဝ၁၁ခုနှစ်မှာ အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။
(၃) ဆန်ဒီလာနာ (Sandy Lerner)
ကွန်ပျူတာပညာရှင် ဆန်ဒီလာနာ (Sandy Lerner) ဟာ နည်းပညာကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ ‘Cisco Systems’ ကို ၁၉၈၄ခုနှစ်မှာ တည်ထောင်ခဲ့တယ်။ ၁၉၉ဝခုနှစ်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ဖိအားကြောင့် သူမကို ဘုတ်အဖွဲ့က ထုတ်ပယ်လိုက်ကြတယ်။ သူမ ပိုင်တဲ့ရှယ်ယာတွေကို ရောင်းချပြီး ကုမ္ပဏီကနေ ထွက်သွားခဲ့တယ်။
(၄) ဂျက်ဒေါ်စီ (Jack Dorsey)
ကွန်ပျူတာပညာရှင် ဂျက်ဒေါ်စီ (Jack Dorsey) ဟာ ၂ဝဝ၆ခုနှစ်မှာ သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ နိုအာ ဂလက်စ် (Noah Glass) ဘစ်ဇ်စတုန်း (Biz Stone) နဲ့ အီဗန်ဝီလျံ (Evan Williams) တို့နဲ့ လူမှုကွန်ရက် ‘Twitter’ ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက သူ့အသက် (၂ဝ) ပြည့်ဖို့ လပိုင်းလောက် လိုပါသေးတယ်။ သူဟာ ‘Twitter’ ကုမ္ပဏီမှာ CEO အနေနဲ့ တာဝန်ယူခဲ့ပေမယ့် လူငယ်ပီပီ အလုပ်ကိုအာရုံမစိုက်ဘဲ ဖက်ရှင်၊ ဒီဇိုင်းနဲ့ ယောဂကျင့်စဉ်တွေအပေါ်မှာ အာရုံစိုက်လွန်းတဲ့အတွက် ကုမ္ပဏီက ၂ဝဝ၈ခုနှစ်မှာ ထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ‘Twitter’ က ထွက်သွားပြီး ‘Square Inc’ ကုမ္ပဏီကို ၂ဝဝ၉ခုနှစ်မှာ တည်ထောင်လိုက်ပြန်တယ်။ ၂ဝ၁၁ခုနှစ်မှာ Twitter ရဲ့ ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ပြန်ယူပြီး ၂ဝ၁၅ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၅) ရက်နေ့မှာ CEO ပြန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ သူဟာ’ Twitter’ နဲ့ ‘Square Inc’ ကုမ္ပဏီရဲ့ CEO တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။
(၅) စတိဗ်ဂျော့ (Steve Jobs)
စတိဗ်ဂျော့ (Steve Jobs) ၊ စတိဗ်ဝေါ့ဇ်နီးယက်ခ် (Steve Wozniak) နဲ့ ရော်နယ်ဝိန်း (Ronald Wayne) တို့က ၁၉၇၆ခုနှစ် ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့မှာ Apple ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၅ခုနှစ်မှာ ဘုတ်အဖွဲ့က ‘စတိဗ်ဂျော့’ ကို ကုမ္ပဏီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းမှာ မပါစေဘဲ ‘New Product Development’ ပိုင်းကိုသာ လုပ်စေပါတယ်။ ဒီအတိုင်းဆိုရင် ‘စတိဗ်ဂျော့’ ဟာ ‘Apple’ မှာ အရေးမပါတော့တဲ့သဘောပါ။ ဒါ့ကြောင့် ‘စတိဗ်ဂျော့’ ဟာ CEO ဖြစ်တဲ့ ဂျွန်စကူလေ (John Sculley) ကို ကုမ္ပဏီကနေ ထွက်ခွာအောင် ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ကြံစည်ခဲ့တဲ့သတင်းကို ဘုတ်အဖွဲ့က သိသွားပြီး ၁၉၈၅ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ ‘စတိဗ်ဂျော့’ ကလည်း သူ့ခြေသူ့လက်ကို စိတ်တိုင်းကျခြယ်လှယ်နိုင်မယ့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ‘NeXT’ ဆိုတဲ့ ကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီပါ။
၁၉၉၆ခုနှစ်မှာ Apple ရဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ ဂေးလ် အာမီလီယို (Gil Amelio) ဟာ Copland လို့ခေါ်တဲ့ ကွန်ပျူတာသစ် တီထွင်ရာမှာ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပိုင်း အခက်အခဲနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလို့ NeXT ကို ဒေါ်လာ ၄၂၇သန်းနဲ့ ဝယ်ယူခဲ့ရပါတယ်။ သဘောတူစာချုပ်အနေနဲ့ Copland အတွက် လိုအပ်တဲ့ NeXtSTEP ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေကို Apple အတွက် ထောက်ပံ့ပေးရမှာဖြစ်သလို စတိဗ်ဂျော့ဟာ Apple ရဲ့ CEO အဖြစ် ပါဝင်ရမယ်လို့ ချုပ်ဆိုခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ၁၉၉၇ခုနှစ်မှာ CEO အနေနဲ့ ပြန်လာခဲ့ပြီး သူ့ကို အလုပ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေကို ပြန်အလုပ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ကဲ . . . ဒါတွေက ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်၊ ရှင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်ပြီး အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပါ။ ဝန်ထမ်းတိုင်း လုပ်ငန်းခွင့်မှာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။
ကုမ်ပဏီကို တညျထောငျခဲ့ပမေယျ့ အလုပျထုတျခံရတဲ့ လုပျငနျးရှငျ (၅) ဦး
လူတဈယောကျဟာ ကုမ်ပဏီတဈခုကို တညျထောငျလိုကျပမေယျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူတှေ ဝငျလာပွီးနောကျပိုငျးမှာ သူတဈယောကျတညျး လုပျပိုငျခှငျ့မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီအခြိနျမှာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူတှကေ သူ့ရဲ့လုပျပိုငျခှငျ့တှကေို ဝငျရောကျစှကျဖကျတတျကွပွီး ကုမ်ပဏီရဲ့တညျထောငျသူတှကေိုတောငျ အလုပျထုတျပဈတတျကွပါတယျ။ ကဲ . . . ကုမ်ပဏီကို တညျထောငျခဲ့ပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာ အလုပျထုတျခံရတဲ့ လုပျငနျးရှငျတှအေကွောငျးကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
(၁) ဒေးဗဈ နယျလီမနျး (David Neeleman)
ဘရာဇီးလုပျငနျးရှငျ ဒေးဗဈ နယျလီမနျး (David Neeleman) က ၁၉၉၈ခုနှဈ သွဂုတျလမှာ JetBlue လကွေောငျးလိုငျးကို တညျထောငျလိုကျပါတယျ။ ၂ဝဝ၂ခုနှဈမှာ CEO အဖွဈ တာဝနျယူခဲ့ပွီး သူ့လစာ ဒျေါလာ၂သိနျး (ဆုကွေး ဒျေါလာ၉သောငျး) ကို ဝနျထမျးတှအေတှကျ ရံပုံငှအေဖွဈ လှူဒါနျးတယျ။ နောကျပိုငျးမှာ လကွေောငျးလိုငျးဟာ ကမောကျကမဖွဈကုနျပွီး ၂ဝဝ၇ခုနှဈမှာ ‘ဒေးဗဈ နယျလီမနျး’ လညျး အလုပျထုတျခံလိုကျရပါတယျ။
(၂) ဂြော့ ဇငျးမား (George Zimmer)
ဂြော့ ဇငျးမား (George Zimmer) ဟာ ကမ်ဘာကြျောအမြိုးသားအဝတျအထညျကုမ်ပဏီ ‘Men’s Wearhouse’ ကို ၁၉၇၃ခုနှဈမှာ တညျထောငျလိုကျပါတယျ။ တညျထောငျသူအနနေဲ့ CEO တာဝနျရော ဥက်ကဌတာဝနျပါ ပူးတှဲထမျးဆောငျခဲ့ပါတယျ။ ကုမ်ပဏီဟာ အမြားပိုငျဖွဈသှားပမေယျ့ သူဟာ အပွညျ့အဝထိနျးခြုပျခငျြပွီး ဘုတျအဖှဲ့ဝငျတှနေဲ့ မသငျ့မွတျဖွဈကာ ၂ဝ၁၁ခုနှဈမှာ အလုပျထုတျခံလိုကျရပါတယျ။
(၃) ဆနျဒီလာနာ (Sandy Lerner)
ကှနျပြူတာပညာရှငျ ဆနျဒီလာနာ (Sandy Lerner) ဟာ နညျးပညာကုမ်ပဏီဖွဈတဲ့ ‘Cisco Systems’ ကို ၁၉၈၄ခုနှဈမှာ တညျထောငျခဲ့တယျ။ ၁၉၉ဝခုနှဈမှာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူတှရေဲ့ဖိအားကွောငျ့ သူမကို ဘုတျအဖှဲ့က ထုတျပယျလိုကျကွတယျ။ သူမ ပိုငျတဲ့ရှယျယာတှကေို ရောငျးခပြွီး ကုမ်ပဏီကနေ ထှကျသှားခဲ့တယျ။
(၄) ဂကျြဒျေါစီ (Jack Dorsey)
ကှနျပြူတာပညာရှငျ ဂကျြဒျေါစီ (Jack Dorsey) ဟာ ၂ဝဝ၆ခုနှဈမှာ သူငယျခငျြးဖွဈတဲ့ နိုအာ ဂလကျဈ (Noah Glass) ဘဈဇျစတုနျး (Biz Stone) နဲ့ အီဗနျဝီလြံ (Evan Williams) တို့နဲ့ လူမှုကှနျရကျ ‘Twitter’ ကို တညျထောငျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျတုနျးက သူ့အသကျ (၂ဝ) ပွညျ့ဖို့ လပိုငျးလောကျ လိုပါသေးတယျ။ သူဟာ ‘Twitter’ ကုမ်ပဏီမှာ CEO အနနေဲ့ တာဝနျယူခဲ့ပမေယျ့ လူငယျပီပီ အလုပျကိုအာရုံမစိုကျဘဲ ဖကျရှငျ၊ ဒီဇိုငျးနဲ့ ယောဂကငျြ့စဉျတှအေပျေါမှာ အာရုံစိုကျလှနျးတဲ့အတှကျ ကုမ်ပဏီက ၂ဝဝ၈ခုနှဈမှာ ထုတျပယျခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ ‘Twitter’ က ထှကျသှားပွီး ‘Square Inc’ ကုမ်ပဏီကို ၂ဝဝ၉ခုနှဈမှာ တညျထောငျလိုကျပွနျတယျ။ ၂ဝ၁၁ခုနှဈမှာ Twitter ရဲ့ ဥက်ကဌအဖွဈ တာဝနျပွနျယူပွီး ၂ဝ၁၅ခုနှဈ အောကျတိုဘာလ (၅) ရကျနမှေ့ာ CEO ပွနျဖွဈခဲ့ပါတယျ။ အခုခြိနျမှာတော့ သူဟာ’ Twitter’ နဲ့ ‘Square Inc’ ကုမ်ပဏီရဲ့ CEO တဈယောကျဖွဈနပေါပွီ။
(၅) စတိဗျဂြော့ (Steve Jobs)
စတိဗျဂြော့ (Steve Jobs) ၊ စတိဗျဝေါ့ဇျနီးယကျချ (Steve Wozniak) နဲ့ ရျောနယျဝိနျး (Ronald Wayne) တို့က ၁၉၇၆ခုနှဈ ဧပွီလ (၁) ရကျနမှေ့ာ Apple ကို တညျထောငျခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၈၅ခုနှဈမှာ ဘုတျအဖှဲ့က ‘စတိဗျဂြော့’ ကို ကုမ်ပဏီရဲ့စီမံခနျ့ခှဲမှုအပိုငျးမှာ မပါစဘေဲ ‘New Product Development’ ပိုငျးကိုသာ လုပျစပေါတယျ။ ဒီအတိုငျးဆိုရငျ ‘စတိဗျဂြော့’ ဟာ ‘Apple’ မှာ အရေးမပါတော့တဲ့သဘောပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ ‘စတိဗျဂြော့’ ဟာ CEO ဖွဈတဲ့ ဂြှနျစကူလေ (John Sculley) ကို ကုမ်ပဏီကနေ ထှကျခှာအောငျ ဝနျထမျးတှနေဲ့ ကွံစညျခဲ့တဲ့သတငျးကို ဘုတျအဖှဲ့က သိသှားပွီး ၁၉၈၅ခုနှဈ စကျတငျဘာလ (၁၇) ရကျနမှေ့ာ ထုတျပယျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီနောကျမှာ ‘စတိဗျဂြော့’ ကလညျး သူ့ခွသေူ့လကျကို စိတျတိုငျးကခြွယျလှယျနိုငျမယျ့ ကုမ်ပဏီတဈခုကို တညျထောငျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါကတော့ ‘NeXT’ ဆိုတဲ့ ကှနျပြူတာကုမ်ပဏီပါ။
၁၉၉၆ခုနှဈမှာ Apple ရဲ့ CEO ဖွဈတဲ့ ဂေးလျ အာမီလီယို (Gil Amelio) ဟာ Copland လို့ချေါတဲ့ ကှနျပြူတာသဈ တီထှငျရာမှာ ဆော့ဖျဝဲလျပိုငျး အခကျအခဲနဲ့ ရငျဆိုငျခဲ့ရလို့ NeXT ကို ဒျေါလာ ၄၂၇သနျးနဲ့ ဝယျယူခဲ့ရပါတယျ။ သဘောတူစာခြုပျအနနေဲ့ Copland အတှကျ လိုအပျတဲ့ NeXtSTEP ဆော့ဖျဝဲလျတှကေို Apple အတှကျ ထောကျပံ့ပေးရမှာဖွဈသလို စတိဗျဂြော့ဟာ Apple ရဲ့ CEO အဖွဈ ပါဝငျရမယျလို့ ခြုပျဆိုခဲ့ရပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ၁၉၉၇ခုနှဈမှာ CEO အနနေဲ့ ပွနျလာခဲ့ပွီး သူ့ကို အလုပျထုတျခဲ့တဲ့ ဘုတျအဖှဲ့ဝငျတှကေို ပွနျအလုပျထုတျခဲ့ပါတယျ။
ကဲ . . . ဒါတှကေ ကုမ်ပဏီကွီးတဈခုကို စတငျတညျထောငျခဲ့ပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာ ဘုတျအဖှဲ့ဝငျ၊ ရှငျးနှီးမွှုပျနှံသူနဲ့ ဝနျထမျးတှနေဲ့ အဆငျမပွဖွေဈပွီး အလုပျထုတျခံရတဲ့ လုပျငနျးရှငျကွီးတှပေါ။ ဝနျထမျးတိုငျး လုပျငနျးခှငျ့မှာ ပြျောရှငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးလိုကျရပါတယျ။